Izibalo zeNtengiso ze-imeyile ze-imeyile, ifowuni, iVoilemail, kunye nokuThengiswa kweNtlalo | Martech Zone
Izibalo zeNtengiso ze-imeyile ze-imeyile, ifowuni, iVoilemail, kunye nokuThengiswa kweNtlalo
NgoLwesine, Novemba 10, 2016 NgoLwesithathu, Agasti 30, 2017 UAndrew Gazdecki
Ukuthengisa lishishini labantu apho ubudlelwane bunento ebalulekileyo njengemveliso, ngakumbi kwishishini lokuthengisa isoftware. Abanini bamashishini badinga umntu abanokuxhomekeka kuye kwitekhnoloji yabo. Baza kuyinyusa le nyani, kwaye balwe nexabiso elingcono, kodwa iya nzulu kunoko. Umthengisi wentengiso kunye nomnini weSMB kufuneka bahambisane, kwaye kubaluleke ngakumbi kwintengiso ukuze yenzeke. Akuqhelekanga ukuba abenzi bezigqibo badlule kwiintengiso abazithandiyo, nokuba oko kuthetha ukuhlawula ngaphezulu.
Kukho ihlaya elidala kulawulo lokuba umthengisi wentengiso akufuneki abe smart - ulumke ngokwaneleyo. Bonke abantu abathengisayo kufuneka bazi indlela yokuvala isivumelwano. Ukuba banokwenza oko, abanye baya kuzikhathalela. Abancedisi beeofisi kunye nabagcini zimali banokhathalela abanye. Into ephambili iisuti kumgangatho ophezulu wokukhathalela malunga nokuba ingakanani imali onokuyizisa umthengisi.
Ukusebenza kwintengiso kukwafuna indlela eyahlukileyo yokucinga. Umchweli uyazi xa into ethile yakhiwe yagqitywa. Umsebenzi wabo uphambi kwabo kwaye ubonakala. Umsebenzi wecandelo lendibano uya kubona ukuba bongeze ntoni kwiwijethi abayincedileyo bayakha, kwaye baya kwazi ukuba zingaphi iiyunithi abazigqibileyo ngosuku. Umthengisi-ntengiso akanayo loo nto ibambekayo. Impumelelo yabo ilinganiswa ngakumbi njengamanqaku kumdlalo. Bayazi ukuba bayifumene, nokuba ayisiyiyo into abanokuyichukumisa kwaye baziva. Amanqaku abo amanqaku aneedola kunye neekota.
Ayisiyiyo intsimi emileyo. Itekhnoloji itshintshe ukuthengisa njengalo naliphi na elinye ishishini. Imithombo yeendaba kwezentlalo inike iindlela ezininzi zokufikelela kubathengi kunye nezinto ezinje nge-imeyile kunokuba zizixhobo ezisebenzayo kwabo bayaziyo ukuyisebenzisa. Le infographic evela IiNkqubo zeBizness ibonisa itekhnoloji efikelela kude kwintengiso, kunye nendlela otshintshe ngayo umdlalo.
Izibalo ezi-19 ezothusayo zokuThengisa eziza kutshintsha indlela oThengisa ngayo
Malunga neeNkqubo zeBizness
IiNkqubo zeBizness yi I-WordPress yokudala usetyenziso lweselfowuni. Uninzi lwabathengi bethu Abenzi beelebheli ezimhlophe -Ientengiso okanye uyilo lweearhente ezisebenzisa iqonga lethu ukwenza iindleko ezifanelekileyo zokwakha usetyenziso olushukumayo kubaxhasi bamashishini amancinci.
tags: ii -apps zebiznessUkunika amandla ukuthengisaizibalo zentengisoizibalo zentengisoivoyisimeyile yokuthengisaizibalo ze-voicemail zentengisoukuthengisa kwezentlaloizibalo zentengiso yomnxeba
U-Andrew Gazdecki ngumseki kunye ne-CEO ye IiNkqubo zeBizness -Ukwenza iiapps zeselfowuni zifikeleleke kwaye zilula kumashishini amancinci. Siyenza ngokwakho i-iPhone, i-iPad, i-Android kunye ne-HTML5 yeqonga lokusebenza elivumela naliphi na ishishini elincinci ukuba lenze ngaxeshanye, lihlele, kwaye lilawule ii -apps zeselfowuni ngaphandle kolwazi lwenkqubo olufunekayo.
Umxholo ubude: Ukuqwalaselwa kweSpans ngokuchasene nokuzibandakanya